I-China Ishintsha Inaliti Yesiko Nemicu Yokuthunga Intambo 20Khz Umshini Wokushisela i-Ultrasonic Wendwangu Yelungu Le-Thermoplastic Qianrong
Kumiselela Inaliti Yesiko Nokuthungwa Kwentambo 20Khz Umshini Wokushisela i-Ultrasonic Wezindwangu Zethermoplastic
Into Cha I-QR-S20DL
Ububanzi isondo Welding 22mm
Kufaniswe i-Transducer 5020-4D PZT4
Usayizi we-generator 400 * 195 * 98mm
Umgogodla womshini wokuthunga we-Ultrasonic ungathunga izindwangu eziningi ze-thermoplastic. Uma kuqhathaniswa nenaliti ejwayelekile nokuthungwa kwentambo, ukuthungwa kwe-ultrasonic akudingi inaliti nentambo, amandla okuthunga aphezulu, ukubekwa uphawu okuhle nokushesha kokuthunga. Futhi ukuthungwa okungenamthungo kwe-ultrasonic kuyisombulula ngokuphelele inkinga yokuthi ukuqondiswa kokunyakaza kwekhanda le-welding le-ultrasonic akuhambisani nokuhamba kokuhamba kwendwangu, futhi inkinga yokungavumelanisi izothatha indawo yomshini wokuthunga ojwayelekile ngezinga elikhulu.
Izinzuzo zokuthungwa okungenamthungo
1. Ukuzinza okuphezulu: Isondo lokushisela kanye nesondo lokucindezela lizungeza ngokuvumelanayo ngokuphelele ngesikhathi sokuthungwa kwe-ultrasonic okungenamthungo, akukho mehluko ngejubane ne-engela, futhi ngeke kubangele ukunweba, ukuhlanekezela noma ukusonteka kwendwangu, okunemba ngokweqile. Ngenxa yomphumela oshisayo oshisayo, asikho isidingo sokusebenzisa intambo yenaliti, umkhiqizo awunamanzi kakhulu, ulula futhi kulula ukugoqwa.
2. Ukushisela nokusika ukuvumelanisa: Ultrasonic imishini yokuthunga engenamthungo ayifanele ukuthungwa okuqhubekayo kuphela, kepha futhi ingasika izindwangu ngenkathi ishisela, futhi ibone ukubopha okuzenzakalelayo komphetho.
3. Ayikho imisebe eshisayo: Amandla angena kusendlalelo sezinto zokushisela ngesikhathi sokuthungwa kwe-ultrasonic, futhi ayikho imisebe eshisayo. Ngesikhathi sokuthungwa okuqhubekayo, ukushisa ngeke kudluliselwe kumkhiqizo, okuzuzisa kakhulu ukupakishwa kwemikhiqizo ezwela ukushisa.
4. Umthungo wokulawula ongalawulekayo: Indwangu idonswa yisondo lokushisela kanye ne-roller roller, idlula kuyo, futhi indwangu ishiselwe ngamagagasi e-ultrasonic. Ngokushintsha i-roller yengcindezi, usayizi we-welding seam kanye ne-embossing kungashintshwa.
5. Izicelo ezahlukahlukene: Zonke izindwangu ze-thermoplastic (ezithanjisiwe ngemuva kokushisa), amateyipu akhethekile, namafilimu kungashiswa kusetshenziswa imishini yokuthunga engenamthungo ye-ultrasonic, futhi ama-roller enziwe ngensimbi eqinisiwe ukunweba impilo yenkonzo.
Langaphambilini Umshini we-20Khz Ultrasonic Welding Welding Wempahla ye-Thermoplastic
Olandelayo: Imvamisa ye-High Frequency 35Khz 1000w ye-Ultrasonic Sealing Equipment ye-Thermoplastic Cloth